:Bọchị: Disemba 12, 2019
Canal Istanbul Project: Channel Istanbul Turkey si mega oru anọgide na-eme ikpeazụ-nkeji ndị na na oru ngo. Ọ bụ ezie na ndị a metụtara na Kanal Istanbul na-eche ụbọchị a ga-ekwuwapụta na ọrụ ahụ, ụbọchị nke mbụ igwu [More ...]
Emere Nzukọ TCDD 2019/2
Onye isi oche nke TCDD, osote onye isi njikwa İsmail Çağlar Onye isi Nchịkwa Onye isi oche (GCC) nke ndị isi ikike Tradelọ Ọrụ Ọchịchị Na-ahụ Maka Njikọ Aka-Sen chọrọ maka ndị ọrụ obodo. Kọmịshọn ahụ rụrụ ọrụ na ndokwa nke thenye Ọdụ Transportgbọ njem-Sen [More ...]
Sivas Ankara Project Train Speed ​​Speed, nke a na-atụ anya imecha ogologo oge, abịawo na njedebe. Abdullah Peker, Onye isi oche nke Transportgbọ njem na ilgbọ okporo ígwè, gwara ndị ụlọ ọrụ nkwekọrịta ahụ [More ...]
BOTAŞ meriri nro maka North Marmara Natural Gas Nchekwa Mbuba Mgbasa na Choline; N’izu gara aga, BOTAŞ mere pọọsụ kilogram 4,5. Companieslọ ọrụ Kolin na Kalyon abanyela na nnukwu BOTAŞ izu gara aga. [More ...]
The isi obodo nke Qatar Hamad Airport mgbasa oru ngo nke ndị na-ewu ọrụ Doha, ndibọhọ TAV Constrium nwekwara hụrụ na ndị na-ewu, gụnyere Turkey. TAV Consortium, MIDMAC na Taisei Corporation JV [More ...]
Minista Turhan, İbiş na Altun’u na-ekwu n'okwu ya n'ọfịs ya, afọ gara aga, "Turk Telekom Tam O An" asọmpi foto, foto ndị e weere na ha kwesịrị igosipụta, kwuru na Ngalaba Nkwukọrịta na Mahadum Ankara. nkwa [More ...]
Anadolu Rail Systems Cluster, ya na onye otu DET memberM, haziri asambodo Railway IRIS asambodo na nzukọ ọmụmụ mgbanwe. Ọtụtụ ụlọ ọrụ si mpaghara usoro ụgbọ oloko sonyere na nzukọ ọmụmụ ihe a na-eme na nnukwu ọgbakọ ogbako OSTİM OSB. [More ...]
Paradaịs ọcha Pamukkale, mgbe nke abụọ paradaịs ọcha nke obodo, Denizli Ski Center, agbanweela ọcha. Obodo Denizli Obodo obodo mepere emepe niile iji nabata ndị ọbịa, oghere nke skai oge iji dọrọ snow chọrọ [More ...]
Ọzụzụ Ọkụ maka Ndị Ọkwọ ụgbọ njem Ọhaneze nke Ngalaba Transportgbọ njem Sakarya; Enyere ọzụzụ ọkụ maka ndị ọkwọ ụgbọ ala na-eje ozi na Ngalaba Transportgbọ njem. Ihe aga - eme megide ọkụ na ihe a ga - eme n’oge ọkụ [More ...]
Transportgbọ njem si KBU Rail Systems Club ụmụ akwụkwọ gaa na Park; Ationgbọ njem, onye enyemaka nke Kocaeli Metropolitan Municipal, kwadoro ụmụ akwụkwọ 40 sitere na Mahadum Rail Systems Engineering iji kọọ ahụmịhe ha na sistemụ ụgbọ okporo ígwè. [More ...]
Turkey ugbu ígwè njem niile anāchi achi, ịnyịnya ígwè ụzọ ga-eji nzube dị ka na-enye igodo na atụmatụ nke egwuregwu na ịnyịnya ígwè na-adọba ụgbọala ebe, usoro maka imewe na-ewu ụlọ ụkpụrụ na kpebisiri ọzọ [More ...]
A ga-arụ ọrụ elektrọnikụ ụlọ ọrụ teknụzụ n'ime okirikiri nke Mbinye Anya Mkpokọta Köseköy Station Logistics Warehouse Mpaghara CCTV Igwe Ọdụ Nchebe Ntinye Teknụzụ Ọrụ Ahụ na Drigbọala Ulo Mgbazinye Prozụ Ọrụ [More ...]
Obodo Obodo Obodo Istanbul haziri “Ọzụzụ Maka Ọzụzụ Maritime na ememe ncheta 564 nke ofgbọ Mmiri Haliç. N’ikwu okwu na nkuzi omumu ihe. Cemal Saydam kwuru, "Meta 25 mbụ nke Marmara nwere Oké Osimiri Ojii, n'okpuru ya bụ mmiri nnu. Ihe owuwu a [More ...]